Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote Rasolonjatovo Honoré : « Tsy misy fihokoan’ny depiote hanongana ny governemanta izany »
Nahoraka tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity fa “mikononkonona ny hanangona Sonia mba hirosoana amin’ny latsa-bato fitsipaham-pitokisana ny governemanta ny solombava eny amin’ny Antenimierampirenena”. Nisy mihitsy aza ny tarehi-marika nivoaka fa “efa mahatratra 71 Ny Sonia voaangona”.
Naneho ny heviny ny Depiote Rasolonjatovo Honoré na i “Papasolo” izay voafidy tany amin’ny distrikan’i Faratsiho ary filoha lefitry ny birao maharitry ny Antenimieerampirenena ho an’ny faritanin’Antanaarivo. Nanambara izy fa “tsy marina izany feo miely izany fa sahoa iniana hampisavoro-
voroana ny sain’ny mpiray tanindrazana”. Nomarihin’ny Depiote Papasolo fa “governemanta vao nijoro tsy nisy iray volana ve dia hanaovana latsabato fitsipaham-pitokisana ?” Efa halako bika tsy tiako tarehy kosa izany, hoy izy.
Ho an’ity filoha lefitry ny birao maharitry ny Antenimierampirenena ity dia “ny ady amin’ny hanohanana sy ny fanalefahana na hamongorana mihitsy ny tsy fandriampahalemana izao no mampanahirana ny vahoaka ka imasoana ary ny fitondram-panjakana foibe no vovona iadian’ny lohany amin’ny fitarihana ny ezaka hampahombiazana izany”.
Ny mpisehatra politika iray naneho ny heviny momba izany koa dia nanindry fa “na misy izany fikasana hitsipa-pitokisana ny governemanta Ntsay Christian izany na tsy misy dia iantsorohan’adidy ny fitondram-panjakana hanao izay farafahaizany amin’ny
fampibaribariana fa voafehy ny olana mamatotra ny
vahoaka ary voavaha ny ampahany betsaka amin’izany”.
Fitaterana an’habakabaka : Toa mitohy ny famotehana ny « Acm » ?